Tababar kusaabsan Caadooyinnka Xunxun - Cakaara News
Tababar kusaabsan Caadooyinnka Xunxun
Fiiq(cakaaranews) Arbaco 16ka March 2016, Tababar ujeedadiisu tahay Dabargoynta Caadooyinka xun xun oo looqabtay Hooyooyinka Degmada Fiiq islamarkaana ay cashaarda bixinayaan khabiiro u xeel dheer ayaa si habsami leh uga bilawday isla Dagmadaas .
Tababarkan oo uu soo agaasimay Xafiska Arimaha Haweenka Caruurta Degmada Fiiq ayaa waxaa lagu baranayaa casharo ku saabsan ladagaalanka iyo waliba sidii loo dabargoyn lahaa caadoyinka xun xun sida gudniinka fircawniga ah iyo wiixiilahalmaala.
Hadaba furintaankii tababarkan ayaa waxaa ugu horayn ka hadalay Gudoomiyaha Degmada Fiiq mudane Cabdiqaadir Maxamed Xasan oo sheegay in dabargoynta caadooyinka xunxun ay lagamamaarmaantahay islamarkaana larabo in Hooyooyinku dhankooda kala dagaalamaan maadaama oo saamaynta ugu wayn uu kuleeyahay dumarka islamarkaana ay qaybta ugu balaadhan ee ladagaalanka caadooyinka xunxun ay ka qaadan karaan hadii ay tahay gabdhaha lagudayo iyo hadii tahay kuwa gudaya gabdhaha labadaba. Sidookale waxaa kahdlay tababarkan kusimaha Xafiiska Arrimaha haweenka iyo Caruurta Degmada Fiiq Marwo Boosteeye Ismaaciil oo sheegtay in tababarkan ay kasoo qaybgaleen qaarkamida hooyooyinka islamarkaana ujeedadiisu tahay ladagaalan caadooyinka xunxun. Sidookalan iyadoo kula dardaarantay inay sii adkeeyaan ladagaalanka dhaqamada xun xun islamarkaana ay sifiican uga faaiidaystaan casharada.
Ugudanabayna waxaa dhankooda kahadlay kasooqaybgalaaashii tabaabrkan oo ay kamid ahaayeen hoyooyinkii iyo dhalinyaradii qaadanayay oo sheegay in ay aad ugufarxsanyihiin tababarkan ay qaadanayaan islamarkaana ay casharo muhiima kabaranayan iyagoo balan qaaday in ay dhankooda si firfircawn uga faaiidaysn doonaan iyo waliba inay gaadhsiinayaan bulshadii ay ka kala yimaadeen.